Xildhibaano kaarar been Abuur ah u sameeyay Dadka Barakacayaal ah oo gacanta lagu dhigay. - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaano kaarar been Abuur ah u sameeyay Dadka Barakacayaal ah oo gacanta...
Xildhibaano kaarar been Abuur ah u sameeyay Dadka Barakacayaal ah oo gacanta lagu dhigay.
Gaalkacyo-(Caasimadda Online)-Wararka naga Soo gaaraya Magaalada gaalkacyo ayaa Sheegaya in Magaalada lagu xiray 3 Xildhibaan oo ka mid ah Golaha degaanka Magaalada Gaalkacyo,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay kaarar been abuur ah u daabici jireen dadka Danta yar,kadibna lacag ka qaadan jiray.
Saddexda Xildhibaan ayaa qoyskiiba ka qaadayay $5 Doollar,kaddibna aan dib ugu soo laabaneyn,iyada oo maamulka Gobolka Mudug ee Puntland uu arrintaas ka war helay.
Maxamuud Yaasin Axmed Tumey Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa sheegay in Xildhibaannada xiran ay ku wareejinayaan Maxkamadaha islamarkaana waxaa uu sheegay in lacagaha barakacayaasha laga qaaday ay u dib ugu celinayaan dadka barakacayaasha ee danyarta ah.
3 Xildhibaan oo kala ah Aways Axmed Salaad,C/waaxid Axmed Maxamed iyo Madar Cali Faarax ayaa kamid ahaa dadkii tagay xarumaha barkacayaasha ee magaalada Gaalkacyo.